हिमालय ऊर्जाको नाफामा ७८.५४ प्रतिशतले गिरावट, अन्य सूचक कस्ता छन् ? - Laganikhabar
हिमालय ऊर्जाको नाफामा ७८.५४ प्रतिशतले गिरावट, अन्य सूचक कस्ता छन् ?
मंगलबार, २५ जेठ २०७८, ०९ : ३२ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सो अवधिसम्म आइपुग्दा खुद नाफामा गिरावट आएको छ ।
मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना जोखिममा
बाढी पहिराको उच्च जोखिममा जलविद्युत् आयोजना, कसरी जोगाउने ?
नेपाल हाइड्रो डेभलपरको नाफासँगै ईपीएस पनि घट्यो, अन्य सूचक कस्ता छन् ?
हिमाल दोलाखा हाइड्रोपावरको नाफा घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?